डकाहा बजार सिल, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ हुदैँ – Dudhauli News
दुधाैली न्यूज — ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:५८ add comment
दुधौली । सिन्धुलीको डकाहा बजार सिल गरिएको छ । तिनपाटनका गाउपालिका वडा नं. ९ का कोराना संक्रमित उपचार गर्न काठमान्डौ जाने क्रममा डकाहामा आफन्तकोमा बसेकाले डकाह बजार सिल गरीएको ईलाका प्रहरी कार्यालय डकाहाका प्रमुख सुगन्ध श्रेष्ठले बताए । उनले संक्रमित बसेको स्थान लगाएतमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्ने पनि बताए ।
संक्रमित गत श्रावण १५ गते उपचारकालागि काठमान्डौँ जान डकाहा आफ्न्तको घरमा बसेका थिए । काठमाडौं गएका तिनपाटन ९ का ७७ वर्षका व्यक्ति टेकुमा स्वाब परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको थियो । उनलाई पहिले नै संक्रमण थियो वा उपचारको क्रममा काठमाडौँमै संक्रमण भयो भन्ने एकिन नभएको पनि प्रमुख श्रेष्ठले बताए । संक्रमित १६ गते सार्वजानिक यातायातमा काठमाडौ गएका थिए ।
संक्रमित व्यक्ति शुक्रवार विहान आफ्नै घर आएका छन् । अस्पतालमा बेड खाली नहुदाँ र उनिलाई संक्रमणको लक्षण नदेखिदा उनिलाई अस्पतालले होम क्वरेन्टाईनमा बस्न आग्रह गरेको थियो । काठमाण्डौमा रुम लिएर बस्ने परिवारमा एकान्तमा राख्ने बाताबरण नभएको कारण आज रातारात घरमा आउनु परेको सक्रमित ब्यक्तिको परिवार श्रोतले जानकारी दिनु भयो । कोरोना सक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा उपचार नगराई काठमाण्डौ बाट आज रातरात आफ्नै घर तिनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर ९ मा आएको छ । कोरोना संक्रमित बृदमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको र अस्पतालमा पनि उपाचार कक्ष खालि नभएको कारण घरमै एकान्तबास राख्न डाक्डरले सुझाब दिएको थियो ।
विहिबार सांझ सात बजे काठमाण्डौबाट एउटा ट्याक्सि दश हजारमा रिर्जभ गरी हिडेको र तिनपाटनमा रातको ३ बजे दुधौली नगरपालिका वडा नं. ४ डकाहा बजार भन्दा माथि ओर्लिएर उनिहरु तिनपाटन गएका हुन् ।